Lokomena, azo itarafana toetra
Inona no menaka tarehy mety aminao?
Miantoka ny fahasalaman’ny hodi-tava sady mitazona ny hatsaran’ny tarehy tsy ho antitra aloha loatra ny fanadiovana azy isan’andro sy ny fanosorana menaka manamandina. Raha vao diso safidy anefa amin’ny fifantenana izay menaka tarehy ahosotra, dia simba tsikelikely ny tarehy.
Fikarakarana tarehy makiana, rehefa ririnina
Mora fantatra ny hoditra makiana sy tsy ampy rano. Maina lava izay izy ary tsy mahazo aina firy, satria mora mangidihidy sy marefo, noho ny hatsiaka sy ny hafanana ; mifandrirotra ary tsapa ho mihenjakenjana. Mora tohina ny hoditra makiana, ka izay no tmahatonga azy hila fikoloana manokana. Inona avy ary ireo fihetsika tsara atao ho azy ireo ?
Maska volo sy tarehy amboarina…tandremo ihany !
Tian’ny vehivavy malagasy kokoa ny mampiasa maska vita ao an-trano, na ho an’ny tarehy izany, na ho an’ny volo.
Fahadisoana 5 fadiana rehefa mampiasa hareza
Be mpampiasa ny hareza rehefa hanala ny volo amin’ny vatana, noho izy ireny mora ampiasaina sy tsotra kely.
“Maquillage” gasigasy, mifanaraka amin’ny asaramanitra…
Miloko volon-tsôkôla ny ati-mason’ny ankamaroan’ny malagasy.
Nahoana no ilaina ny « baume à lèvres » ?
Rehefa mangatsiaka tahaka izao ny andro, no tena ampiasan’ny olona ny « baume à lèvres ».
Ny fahalalan'ny besinimaro ny « gommage » dia hoe manala « peau morte » na ireo hoditra maty mandoto sy mahaela ny fipoitran’ny hoditra vaovao.
Ravaky ny molotra sy ikoloana azy no tena ampiasana ny lokomena. Fantaro anefa fa azo amaritana ny toetran’ny olona iray ny lokon’ny lokomena mahazatra azy. Lazao anie ny loko tena tianao atao amin’ny molotra dia holazainay anao ny toetra mifanaraka amin’izay e !
« Rouge pétant »
Ity lokomena ity, dia fihosotry ny vehivavy matoky tena, tia dokafana sy ankasitrahana. Mora ho azy ny mizara tsiambaratelo, izay mahatonga azy hanintona ny olona avy hatrany.
Somary matroka eo ambony molotra ity lokomena ity, manambara fa olona manana faharetana sy olona milamina. Karazan’olona mieritreritra lalina sy mandinika vao manapa-kevitra, fa tsy mba ireny manao zavatra tampoka sy kitoatoa ireny. Lokon’ny fandresen-dahatra ny “mauve”
« Rouge sobre »
Ny lokomena « rouge sobre » indray, izay tsy midorehitra fa mihaja kosa, dia an’ireo vehivavy mahataitra olona foana, na dia tsy iniany atao aza. Lokomena natao ho an’ireo vehivavy mihaja, tsy tia sehoseho ary milamina izy ity. Na izany aza, tsy mahatofoka mihitsy ny miaraka amin’ity karazam-vehivavy ity : rehefa tena matoky an’izay olona miaraka aminy izy, dia mahavita zava-mahagaga !
Ny lokomena voasokajy ao anatin’ny “pêche” indray, dia an’ireo vehivavy malala-tanana sady mihevitra foana ny olona akaiky azy. Izany rahateo no mahatonga ireo vehivavy tia mihosotra an’ity loko ity, ho olona tena tia sy miraiki-po amin’izay akaiky azy. Noho izany, dia maneho fitiavana sy halefahan-toetra aminy avokoa, ireo olona manodidina azy
Ny karazana vehivavy tia mihosotra ity lokomena ity, dia vehivavy sahisahy : tsy menatra sady tsy matahotra haneho ny toetrany. Tia manao anjoria (aventure) ihany koa ary tia manao fifankahafantarana vaovao, sady tia maka traikefa. Tsy matahotra zavatra tsy hay !
Vehivavy te hanintona sy hisarik’olona no tena tia an’ity lokomena ity. Karazana vehivavy miaina ny zava-misy, fa tsy mba miahiahy izay eritreretin’ny olona aminy. Itiavan’ny olona azy betsaka izay toetrany izay.
Ny vehivavy tia mihosotra lokomena mavokely matsatso, dia vehivavy tsotra sady malefaka ary ny olona rehetra dia mahita azy ho mahafinaritra avokoa. Izay toetra izay no hahatsiarovan’ny olona azy. Malefaka sady be tambitamby, tony sady milamim-piainana, ka zarainy amin’ny manodidina azy izany. Mahay miaraka amin’ny karazan-toetran’olona maro.
Raha tia manao lokomena mainty ny vehivavy iray, dia maneho fa somary mahery setra, bebe fo. Izany miditra amin’ny fiainan’ny hafa izany no tena tsy hainy indrindra ary saika olona mitokana izy matetika. Mety ho olona tia mampihomehy, na mihomehy ihany koa anefa, ka tian’ny olona ny miaraka aminy.